Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Oo Ammaanay Kuuriyada Koonfureed | Somaliland Today
← Xisbiga Haya Talada Dalka Koonfur Afrika Oo Si Rasmi Ah Uga Dalbaday Madaxweyne Zuma Inuu Is-casilo
Raysal Wasaaraha Israa’iil Oo Wajahaya Eedaymo Musuq-maasuq. →
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Oo Ammaanay Kuuriyada Koonfureed
(SLT-Pyongyang)-Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqay in la sii xoojiyo ” jawiga dib u heshiisiineed” ee ay abuurtay Kuuriyada Koonfureed oo martigalineysa ciyaaraha qabobaha ee Olimbikada.
Kim Jong-un ayaa Kuuriya Koonfureed ku amaanay ku martigalinta waddankisa ciyaaraha ka dhacay Pyeongchang.
Wafdiga ka yimid waqooyiga oo ka qeybgalay furitaanka ciyaaraha ayaa waxaa hogaaminaayey gabadha la dhalatay Kim Yo-jong waxayna hadda ku laabteen waddankooda .
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Mareekanka uu ufuranyahay in ay wadahaddla la yeeshaan Kuuriyada Waqooyi.
Ka qeybgalka Kuuriyada Waqooyi ee ciyaarahan ay martigleineysa Kuuriyada Koonfureed syaa loo arkay inay dardar gelineysa xiriirka labada dal.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionBooqashada haweenaydan oo ay walaal yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd hadal hayska ugu badan ee ciyaaraha Soel
Booqashada Kim iyo Kim Yong-nam ayaa ah tii ugu horreysay oo ay xubna ka socdo Kuuriyada Waqooyi ku tagaan Kuuriyada Koonfureed tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labada Kuuriya sanadkii 1950-kii.
Labada Kuuriya waligood si rasmi ah uma saxiixan heshiis nabadeed markii uu dhamaadey dagaalkaasi.
Hase yeeshe,Sabtidii haweeneyda lagu magacabo Kim waxay gudoonsiisay warqad Madaxweye Moon oo ka timid walaalkeed ,isagoo ku casuumayaa in uu soo boqdo Pyongyang.
Haddii uu kulankaasi qabsoomana ,waxay noqonaysa markii ugu horreysay oo hogaamiyayaasha labadda Kuuriya ay kulmaan.